RANDRIANARISOA PENJY : Voafidy ho filohan’ny KOM TIM Ivato · déliremadagascar
RANDRIANARISOA PENJY : Voafidy ho filohan’ny KOM TIM Ivato
Socio-eco	 14 février 2021 R Nirina
Lany tamin’ny isam-bato 233 amin’ny mpifidy 244 Randrianarisoa Penjy. Tontosa ny 14 febroary 2021 teny amin’ny espace IvatoSoa ny fifampiarahabana nahatratry ny taona vaovao 2021 an’ny mpikambana antoko TIM (Tiako I Madagasikara) eny amin’ny kaominina Ivato sy ny fanavaozana ny birao KOM TM Ivato. Ankoatra ireo mpikambana TIM Ivato dia nanatrika izany ihany koa ireo fikambanana toy ny FAPI, KMP (komity mpanohana an’i Penjy Randrianarisoa) ny fikambanan’ny mpivarotra ary ireo fikambanana ara-panatanjahantena. Amin’ny maha fety ity fihaonana ity dia niara-nitotorebika, niara-nisakafo tamin’izy ireo ny Ben’ny tanàn’ny kaominina Ivato, Randrianarisoa Penjy izay voafidy tamin’ny alalan’ny antoko TIM sy ireo mpiara-miasa aminy. Omby iray no novonoina tamin’izany ka nifampizarana tamin’izay rehetra tonga teny an-toerana rehefa avy nandrahoana. Anisany nampiavaka ny fety ihany koa ny fampisehoana nataon’ireo fikambanana mampianatra ny fanatanjahantena toy ny Kung-Fu eny amin’ny kaominina Ivato.
Tsy adino ary ny tena zava-dehibe indrindra dia antony nanaovana ity fifampiarahabana nahatratry ny taona ity ihany koa ny fanavaozana ny biraon’ny KOM TIM Ivato. Notanterahina tamin’io fotoana io ny fifidianana ny birao vaovao. 244 ny isan’ireo mpifidy ary roa ny kandida. Nangatahin’ny besinimaro hilatsako-fidiana Randrianarisoa Penjy. Rehefa natao ny fanisam-bato dia nahazo vato 233 izy. Ny kandida faharoa kosa nahazo vato 3. Vato maty 3 ary vato fotsy 5. Ireto voalaza anarana manaraka ireto izany no mandrafitra ny birao vaovao KOM TIM: Randrianarisoa Penjy no Filoha, Razaoarisoa Voahanginiaina no Filoha lefitra, Randriantsirena Narimalala no Sekretera jeneraly, Rakotoarisoa Flavy no mpitam-bola, Rahantanirina Olga (Amanda) sy Ravelonjanahary Olivier no mpanara maso ny vola, Dadatoa Tor, Andrianantenaina Michel (Dadan’i Santatra), Ratsarafara (Rajao Malokila), Rakotozafy Nirina Olivier, Randriamamizafy Ignace dit Gona, Ramaroson kosa no mpanolotsaina.